ကိုသာမြေ၌နေစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးမျိုးစေ့နှင့်အချိန်တို့၏သင်တန်းအတွက်၎င်း၏အသီးလိုက်လျောနိုင်ပါ။ သာခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်နေစဉ်ကသနေိုငျ နေ. မည်သည့်အတွက်အထည်ချုပ်ရက်စိတ်ထဲနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တော်သည််လင်းဦးဆောင်သောလမ်းကြောင်းထဲသို့ဝင်သည်မဟုတ်လော ဘာမျှမလှစ်ဟအမှန်တရားနှင့်သင့်အကြားရပ်တည်မရောက်မှီတိုင်အောင်, ထို့နောက် မှစ. နှိပ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့လာကြ၏။
vol ။2အောကျတိုဘာ, 1905 ။ အမှတ် 1
ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်၏သံသရာမှာ, ကဗြာဆနျဖန်စီ, ဒါမှမဟုတ်ဆန်းကြယ်မှုများစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏, အဲဒါကိုထဲမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တစ်ဦးချင်းစီလူ့ခန်ဓာဝိညာဉျကိုဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အတွက်၎င်း၏အိမ်ထောင်ဖက်ရှာရမယ်အကြောင်း, အဘယ်သူ၏အလိုဆန္ဒများနှင့်စိတ်ခံစားမှုနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွပေးခဲ့ကြသည်အချို့တို့ကယုံကြည်သည်နှင့်အထင်ထားသည် ကမ္ဘာကြီး, ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာတိုးတက်မှုစေ။ နောက်ထပ်, ဤများအတွက်အကြောင်းပြချက်လမ်းဖြင့်, ကဝိညာဉျက၎င်း၏မူရင်းအတွက်တဦးတည်းခဲ့ဟုဆိုသည်, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားနှင့်သီးခြားလူ့အသက်ကို၏အမျိုးသမီး-ဤအရပ်မှအဆိုပါဒုက္ခနှင့်တောငျ့အဖြစ်ကိုခှဲဝေရှေးဟောင်းအပြစ်တရားမှမရှိစေရန်။ အကြောင်း, ကမ်ဘာပျေါတှငျက၎င်း၏လှည့်လည်ပြီးနောက်၎င်း၏အပြစ်အတွက် expiation လမ်းဖြင့်, စိတ်ဝိညာဉ်၌မှာနောက်ဆုံး "အခြားတစ်ဝက်" က၎င်း၏ "အိမ်ထောင်ဖက်" သို့မဟုတ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပေါ်မှာတင်သောနှင့်အတူသာဝိညာဉျသဖွငျ့လူသိများခံရဖို့ပြီးပြည့်စုံသောပျော်ရွှင်မှုကြောင့်ကာလအပျေါမှာရိုက်ထည့်ပါမယ်လို့ ဝိညာဉျသ။ နှစ်လုံးတပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအယူအဆအတော်များများတော်တော်လေးမူကွဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာကဗြာဆနျဗီဇအပြည့်အဝကစားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ပြီးအတိုင်ဘာသာရေးမှသူ့ဟာသူချေးငှားကြလိမ့်မည် ဒါပေမယ့်မပျော်ရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တဲ့အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်မှာလုံ့လဝိရိယထားလျှင် "ဝိညာဉျသ-အိမ်ထောင်ဖက်က" စိတ်ကိုတစ်ဦးကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ရှည်လျားစေနှင့်, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအား၏တရားမှစစ်မှန်တဲ့မည်, တဦးတည်းလာမည့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်က "အိမ်ထောင်ဖက်" ပြီးသားထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်တားမြစ်သင့်သောပြည်တွင်းဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်။ ရံဖန်ရံခါသူတို့၏စိတ်ဓါတ်များများအတွက်အကောင့်မှတစ်ဦးချင်းစီကတခြားသင့်လျော်သောနှစ်လုံးတပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအယူအဆမှသူတို့ကိုယ်သူတို့နှငျ့ညီညှတျရှာတွေ့ခြင်း, တစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားများအတွက်ကြပြီရမယ်, သူတို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုသူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုင်ရမယ်အမွှာများမှာအဖြစ်ကြေညာသူနှစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်များ။ ယုံကြည်ချက်၏ဤအဆင့်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်သောအခါအရှုပ်တော်ပုံကိုလိုက်နာဖို့နီးပါးသေချာသည်။ ထိုအခါ "ဝိညာဉျသ-အိမ်ထောင်ဖက်" သူတို့နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်မှားယွင်းသောအခြေအနေများအောက်တွင်နေထိုင်နေကြကြောင်းနေကြသည်ကြေညာ။ သို့သော်များစွာသော, ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့ကိုတွေ့ဖူးအချို့ခဲ့ကြသည်သော "ဝိညာဉျသ-အိမ်ထောင်ဖက်" သူတို့မဟုတ်ခဲ့ဆန္ဒရှိမှနောက်ပိုင်းတွင်အကြောင်းမရှိရှိခဲ့တယ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာဇနီးဒါခေါ်အယူဝါဒကဒီအယူအဆအဘို့အခြားအမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အမွှာ-စိတ်ဝိညာဉ်၏ဤအယူဝါဒကိုမဆိုအသက်ပါဆုံး pernicious သှနျသငျတစျဦးဖွစျသညျ။ ဒါဟာလိင်၏လေယာဉ်မှစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားပါကတိရိစ္ဆာန်စားချင် gratify မှမိသားစုဆက်ဆံရေးဖောက်ဖျက်လိမ့်မယ်, ဝိညာဏရင်ခွင်အောက်မှာတစ်ဦးကာမဂုဏ်တပ်မက်ဖုံးကွယ်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါအမွှာ-ဝိညာဉျကိုရှေးမှော်အတတ်သမိုင်းကနေယူနေတဲ့မတရားအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမူလက, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အဖြစ်ယခုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလောင်းကောင်-ပေမယ့်ဒီသတ္တဝါဘုရားရှိသူများထံသို့တူသောအင်အားကြီး၏သိမ်းယူခဲ့သောအချိန်ကာလ၏လူသားထုတဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းအပါအဝင်သို့ -divided မခံခဲ့ရ, သေသောသူတို့ကိုအားဖြင့်ပြောဆို; ဒါပေမယ့်တစ်ခု incalculable ကာလပြီးနောက်ယောက်ျားသည်မိန်းမ၏အမျိုးနွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နေ့တာ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဖြစ်လာပြီးဒါကြောင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲသူတို့တစ်ချိန်ကသူတို့ခဲ့ကြသည်သောအင်အားကြီးနိုင်ငံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
သို့သော်သမိုင်းသို့မဟုတ်ဒဏ္ဍာရီထက် surer ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုကောင်း, လူ့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးအချိန်အဖြစ်အပျက်ထိန်းသိမ်း။
Embryological ဖှံ့ဖွိုးတိုးတက၎င်း၏အစောဆုံးအဆင့်တွင်သန္ဓေသားလိင်မပါဘဲကြောင်းပြသ; နောက်ပိုင်းတွင်ကိုမလိင်အဖြစ်မှန်အတွက် Dual-sexed ကြောင်း, အပြည့်အဝသိသာပေမယ်; နေဆဲအကြာတွင်ကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ကဆိုပါတယ်စေခြင်းငှါ။ ကိုယ်ကသာယင်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထီးဖြစ်လာသည်။ လိင်ဖြစ်စေအပြည့်အဝဖှံ့ဖွိုးတိုးပြီးနောက်တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်၌ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏အထူးအခြေခံကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတုန်းပဲရှိသေးကြောင်း: ခန္ဓာဗေဒကိုလည်းဤအရေးကြီးသောအချက်ကိုပြသထားတယ်။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် Dual-sexed လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကနေအမျိုးသမီးကိုပထမဆုံးထင်ရှားကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လေးကွဲပြားအဆင့်ဆင့်၏ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တစ်ခုကြီးမားကာလဖုံးအုပ်တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအအဆင့်ဆင့်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာယခုဓာတ်သတ္တု, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, တိရစ္ဆာန်, နှင့်လူ့လောကကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ တွင်းထွက်မှာတော့ပုံစံပထမဦးဆုံးအစောဆုံးသိုက်အတွက်ကိုထင်ရှားစွာပြမှအစပြု, ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ဟာသူအတွင်းကနေအလုပ်လုပ်ကိုင်အသုံးပြုပုံနှင့်ဓာတုဆှဖှေဲ့ "အဖြစ်သိပ္ပံမှလူသိများသောသံလိုက်ပါဝါ၏အရေးယူမှုအားဖြင့်, စုံလင်သောကျောက်သလင်း၏ပုံစံကိုတီထွင်သည်။ , သံလိုက်ပါဝါ၏အကူအညီနှင့်စက်ရုံအတွင်းကနေတိုးတက်မှုနှင့်ချဲ့ထွင်မှုမှတဆင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်သည်ဓာတ်သတ္တုအတွက်ပုံစံ၏ပထမအဆင့်နှင့်အတူဘဝကိုဒုတိယအဆင့်တွင်ထင်ရှားစွာပြမှစတင်ခဲ့သည်နှင့်စက်ရုံအသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးအရိပ်လက္ခဏာတွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် -cell ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်န့ ်. ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အမျှဇီဝဗေဒနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်မှလူသိများသည် "ရှကျပေါကျ။ " စက်ရုံအသက်တာ၏တိုးတက်မှုနှုန်းစဉ်အတွင်းဆန္ဒပထမဦးဆုံးအသက်တာ၏ချဲ့ထွင်အသုံးပြုပုံရာမှနောက်ပိုင်းတွင်, ဘဝ-ဆဲလ်အတွင်း duality ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားဖြင့်ထင်ရှားနေသည်နှင့် အလိုဆန္ဒ၏ဆွဲဆောင်မှု, တိရစ္ဆာန်-ဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှစ်ခုနီးပါးနှင့်ညီမျှဆဲလ်သို့အပိုင်းသုံးပိုင်း, နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူ attribute တွေရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်တတိယအဆင့်ကို "ဆဲလ်-division" ဟုခေါ်သည်။ ဒီတတိယအဆင့်က၏နောက်ပိုင်းတွင်ဖှံ့ဖွိုးတိုး၌, တိရစ္ဆာန်-ဆဲလ်လိင်တငျပွကမရှိတော့ဌာနခွဲ "ကမျိုးစိတ်ကိုဆက်လက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ဝါဒဖြန့်ဘို့အဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှစ်ခုဆဲလ်များ၏ပြည်ထောင်စုလိုအပ်ပါတယ် "သာ။ စိတ်ထဲ၏အခြေတည်စပိုးတိရစ္ဆာန်-ဆဲလ်အတွင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်, နောက်ထပ်စိတ်ထဲများ၏လူ့ဇာတိအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောလူ့ပုံစံပေါ်ယူသွားတတ်၏အခါတိရိစ္ဆာန်အတွက်လိင်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူလူ့စတုတ္ထအဆင့်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဤအလေးအဆင့်ဆင့်ယခုကြှနျုပျတို့ရှိသည်သောအလောင်းများကို၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုဖျောပွ။ ပထမဦးဆုံးအကြီးကာလ၏အလောင်းများကိုအတန်ငယ်ကြည်လင် spheres ကို၏အသွင်အပြင်ခဲ့ရပြီးနေရောင်ထက်လျော့နည်းပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကျောက်သလင်းနယ်ပယ်အတွင်းအနာဂတ်လူသား၏စံပြဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီပြိုင်ပွဲများ၏သတ္တဝါသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်လုံလောက်သောခဲ့ကြသည်။ သူတို့ပုံစံအားလုံးကိုပါပြီတည်ဆောက်လိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်စံပြပုံစံများကိုကိုယ်စားပြုသည်, သူတို့ကမသေခဲ့ဘူး, မသူတို့သည်အစဉ်ဝဠာနောက်ဆုံးမှရကြလိမ့်မည်သကဲ့သို့ရှည်လျားဖြစ်ငြိမ်းလိမ့်မည်။ ဒုတိယကာလ၏အစအဦးကိုယ်တိုင်ကထဲကထွက်ကာ opalescent ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်ကြက်ဥကဲ့သို့ပုံစံချပြီးပထမဦးဆုံးကာလများ၏ကြည်လင်တူသောအလင်းဆုံဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်မှတ်သားရ၏ ကြက်ဥကဲ့သို့ပုံစံပါရှိသောခဲ့ကြသည်အတွင်းကျောက်သလင်းစက်လုံး၏ထွက်သက်တော်သည်နှင့်ကြက်ဥကဲ့သို့သောပုံစံအားဖြင့်လှုပ်ရှားမှုသို့ခေါ်တော်မူခဲ့ပြီးသောအသက်တာ၏ပိုးမွှား, အလှည့်၌, တငျပွရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စနှိုးဆွ။ သတ္တဝါ၏ဤဒုတိယပြိုင်ပွဲနီးပါးတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းထင်ရမှသကဲ့သို့လှည့်နေတဲ့စက်ဝိုင်းများကဲ့သို့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၌, ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလားတူပုံစံများကိုထွက်ချပြီးပေမယ့်ကြက်ဥကဲ့သို့ပုံစံအတွင်းတစ်ဦး elongated အကွင်းဆက်ရှိခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကို perpetuated ။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှင့်အတူသူ့ဟာသူပေါင်းစည်းကန့ ်. ဖူးပုံစံသို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ တတိယကာလဒုတိယကာလပြိုင်ပွဲန့ ်. ခဲ့သောကြက်ဥကဲ့သို့သောပုံစံများနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ကို double-လိင်၏သတ္တဝါသို့ elongated အကွင်းဆက်န်းကျင်သိပ်သည်းကြက်ဥကဲ့သို့ပုံစံတကိုယ်တည်းအတွက်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို။ * Desire ကို double-sexed သတ္တဝါ၏ဤပြိုင်ပွဲအတွက်နှိုးဆော်ခြင်းနှင့်အချို့သောသူတို့ကထုတ်ဆောင်ခဲ့ကြသောပါဝါကျလာသောစတင်ခဲ့သည် ။ အတွင်းအသက်နှင့်ပုံစံကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲကနေ, ဒီလူ့ပုံစံအတွက်ယခု umbilicus, တဖြည်းဖြည်းသိပ်သည်းကထုတ်ပေးရာမှတဦးကိုအလားတူပုံစံတခုသို့ခဲထားတဲ့ထွက်ထုတ်ပေးတဲ့ vapory ပုံစံသည်အဘယ်အရာကနေစတေဲ့အတှကျဝါသနာတူများနှင့်ခံ။ ပထမတော့ဒီသာအနည်းငယ်အားဖြင့်ပြုသောအမှု, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ပြိုင်ပွဲ၎င်းတို့၏ဥပမာနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကျောက်သလင်းကဲ့သို့ spheres ကိုပထမဦးဆုံးအနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖူးသောသူတို့၏အမျိုးအခြို့သောလွှမ်းမိုး။ ဤသည်လူသားထု၏သင်တန်းပို့ချအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသူ imperishable undying ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေကွယ်လွန်သွားပေမယ့်သူတို့ရဲ့သားမွေးအတွက် reappeared ။ †အရှင်ထုတ်လုပ်အဆိုပါအလောင်းများကိုသိပ်သည်းနှင့်ပိုပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းလာပြီးအစောပိုင်းအချိန်တွင်နောက်ဆုံးသူတို့မရှိတော့ဝါဒီများကိုစွမ်းအားများနှင့် generate နိုင်သည်အထိ, အခြားထက်ပိုပြီးသိသာသည့်လေ့လာခြင်း၏တဦးတည်းရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့စီကနေ သူ့ဟာသူကြီးစိုးမလိင်များ၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါလျော့နည်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်အဖြစ်တစ်ဦးတည်း။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီသည်အခြားလိင်နှင့်အတူစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသူတို့ကိုသိသည်အတိုင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏မျိုးနွယ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပထမဦးဆုံးကာလမှာတော့ကြည်လင်ကဲ့သို့သောနယ်ပယ်များ၏ပြိုင်ပွဲသူတို့န့ ်. ရသောသတ္တဝါများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖို့တွန်းအား ပေး. , ဒါပေမယ့်ကို double-sexed သတ္တဝါ generate နှင့်လိင်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်သည်အထိသူတို့ဆိတ်ကွယ်ရာနောက်တော်သို့လိုက်သောသူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ထိုအခါကြည်လင်ကဲ့သို့ spheres ကိုလွှမ်းမိုးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုကထုတ်လုပ်အလောင်းတွေကတဆင့်အသက်ရှူ။ ထိုအချိန်မှစ. အသက်အရွယ်လွန်ကြပေမယ့်ကြည်လင် spheres ကိုစိတျတစျဆငျ့သညျလူသားတို့နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရှိနေဆဲပါပြီ။ သူတို့ထံမှစိတ်ကို incarnates နှင့်စိတ်ကိုကနေခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏လူ့ပုံစံယူပြီးပြန်လည်သိမ်းပိုက်။ အတိတ်၏ dual-သတ္တဝါခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကြည်လင်ကဲ့သို့ spheres ကိုလူသားတို့နှင့်အတူစိတ်ကို၏အဆက်အသွယ်မှတဆင့်ထောက်လှမ်းရေးနေိုငျဖြစ်လာလတ်သည်။
ဤအမှုအလုံးစုံကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကြားတဲ့သူတွေကိုထူးဆန်းပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကူညီပေးခဲ့သည်မရနိုင်ပါ။ တှေးတောဆငျခွနှင့် embryological တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဇီဝကမ္မဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အလင်း၌လေ့လာခဲ့လျှင်၎င်းသည်လျော့နည်းထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာမှုနဲ့ဘာဝနာအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်နေဆဲဖြစ်သည်။
လိင်၏သိပ္ပံအရှိဆုံးစုံလင်သောအလောင်းကောင်ထုတ်လုပ်ရန်ပုံကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိင်၏ဒဿနအလောင်းတွေ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရန်သူတို့ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိင်၏ဘာသာတရားကလိမ်မာပါးနပ်စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်လာရန် duality ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ noumenal ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယျသို့ Duality ဖြစ်ပါသည်, လိင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကမ္ဘာမှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိင် Duality ၏အရှိဆုံးပြည့်စုံ, ဖွဲ့စည်း, စကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသဘောသဘာဝဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါလေ့လာခြင်းစိတ်ကိုဒီလောကမှာသူ့ဟာသူညီမျှနှင့်ဟန်ချက်ညီဖို့သင်ယူရပါမည်နှင့်ရာမှတဆင့်အသက်တာ၏ရေစီးကြောင်းပုံစံသို့ပဲ့ထိန်းထားရမည်ဖြစ်သောမှတဆင့်အကြေးခွံသို့မဟုတ်တူရိယာဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်စိတ်ကို၏လူ့ဇာတိနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံအလောင်းတွေသို့, လိင်ရှိပြီးစိတ်ကိုလုံ့ဆော်မူ, intoxicating သူတစ်ဦးအာဏာရှင်အသွင်ပြောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါအာဏာရှင်လူကိုအပေါ်တံဆိပ်ခတ်ထားတော်မူပြီ, လူသံကွင်းဆက်နှင့်ဝသကဲ့သို့၎င်း၏တန်ခိုး၌ကျင်းပသည်။ လိင်ကျွန်နှင့်ယခုအကြောင်းပြချက်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဆန့်ကျင်ပြုမူဖို့စိတ်ကိုနှိုးဆော်ခြင်း, ဒါကြောင့်ပြည့်စုံသောလူသားမျိုးနွယ်တစ်ဦးကျယ်ပြန့်တပ်ကိုအကြောင်းပြချက်စစ်တိုက်ခြင်းမှဝင်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်ရာသီနှင့်အချိန်တို့၏ဥပဒေများထားပြီးအဖြစ်က၎င်း၏အာဏာအရာအားဖြင့်လိင်ဖြစ်ပါတယ် အုပ်ချုပ်ရပါမည်။ ဤအဥပဒေများကိုလျစ်လျူရှုလူမျိုးနှင့်တိုင်းရင်းသားများတိရစ္ဆာန်များ၏အဆင့်ကိုအောက်တွင်နစ်မြုပ်နှင့်ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးရာရေအောက်တွင်ရှိသှားပွီ။
လိင်ဤလောကသို့ကြွလာသောသူအပေါင်းတို့သည်သတ္တဝါဖြေရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သောနက်နဲသောအရာတခုကိုဖြစ်ပါတယ်။ နေဆဲ၎င်း၏ကျွန်ခံအောက်မှာသူတို့အား, လိင်အစဉ်အဆက်နက်နဲသောအရာတခုကိုဆက်လက်တည်ရှိရပါမည်။ လိင်၏နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းရန်၎င်း၏ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ကနေမိမိကိုယ်ကိုလွတ်ရန်, အစဉ်အမြဲပိုမြင့်ပုံစံများသို့အသက်တာ၏ရေစီးကြောင်းကိုလမ်းပြနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သိ, ရဲ, Will, တိတ်ဆိတ်: အဟောင်း၏နက်နဲသောအရာအတွက်က neophyte ဤလေးပါးသောတရားစကားအဓိပ္ပါယ်ကိုသို့အစပျိုးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ခဲ့သည်။ က Man မေ့လျော့ခြင်းသို့မဟုတ် Mystery တံခါးဖို့လမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သို့သော်ဒဏ္ဍာရီများနှင့်သင်္ကေတကိုအမြဲနက်နဲသောအရာတို့ကိုဗိမာန်တော်သည်ယောက်ျား၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသက်သေဖြစ်ရပြီ။
ယောက်ျားမိန်းမထက်ဝက်သာလူတဖြစ်ပြီး, လက်ထပ်ထိမ်းမြားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသား၏ရှေးအကျဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အခြို့သောတာဝန်များကိုပါဝငျသညျ။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ပထမဦးဆုံးနှင့်အရေးပါဆုံးတာဝန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိ၏ မအာရုံ၏မျှသာအလိုလိုကျလှနျးခွငျးအဘို့အလက်ထပ်ထိမ်းမြား, ဒါပေမယ့်လူသားထုပြိုင်ပွဲရှည်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်အရာမှတဆင့်ပြည်ထောင်စု။ ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့တာဝန်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှစ်ခုသတ္တဝါအမျိုးအစားသူ့ဟာသူအတွင်းဖခင်နှင့်မိခင်နှစ်ဦးစလုံးပါဝငျမညျသောစုံလငျခွငျးအမျိုးအစားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ခြင်းဦးတည်းထဲသို့ရောနှောနေခြင်းသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ခြင်းဖို့တာဝန်အသီးအသီး၏အသကျစမ်းသပ်မှုတွေနှင့်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အခြားတစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာဖြစ်သင့်, အခြားမှတစ်ခုချင်းစီကိုကမ်းလှမ်းမှု၏သဘောသဘာဝအဖြစ်အများဆုံးလိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာတွေထွက်ပတ်လည်ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်အခြားများ၏ဇာတ်ကောင် polish ဖို့ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်လျက်ရှိ, အခြားသကဲ့သို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်ကောင်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်ဘက်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဟာကမ္ဘာ့ဟုခေါ်တွင်ကျောင်း-အိမ်တော်၌လေ့လာသင်ယူသောသင်ခန်းစာများကိုသက်ဆိုင်, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဦးပျော်ရွှင်အသက်ရှင်နေထိုင်မယ်လို့သောသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်၏ပြဿနာဝေးသောပိုမိုနက်ရှိုင်းနက်နဲသောအရာပါရှိသည်။ ၎င်း၏အမြွှာ-ဝိညာဉျသအယူအဆများ၏အဆင့်တွေထဲကသို့နားလည်မှုလွဲခြင်းနှင့်လှဲခံရဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကောင့်ပေါ်မှာတိုးတက်အချို့အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ဤသည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည့် Rosicrucians ၏သင်္ကေတများနှင့်ခပ်သိမ်းသောကာလ၏ဒဿနပညာရှင်၏စစ်မှန်သော alchemical အရေးအသား၏ဘာသာရပ်ဖြစ်သည့်လက်ထပ်ထိမ်းမြား၏မြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်, မရရှိစ၏အနည်းလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လူကိုအတွင်းရှိအလားအလာအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ထိုမိန်းမသည်အတွင်းအလားအလာတယောက်ကြောင်းကို: ဒါဟာလူ့ဖြစ်လျက်ရှိအတွက်နှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုပါရှိသောကြောင်း, ဧကန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲရလဒ်ဖြစ်သော၏ primeval ပထမဦးဆုံးလူမျိုး, ဆဲထိုသို့ဘုရားသခင့အတ္တအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကလူ့ဖြစ်လျက်ရှိမှကိုယ်စားပြုနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Dual-sexed ဘိုးဘွားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အမျိုးအစားကိုနောက်တဖန်အပြည့်အဝလူ့ခန်ဓာ, ဘုရားအတ္တသည်ကျောက်သလင်းနယ်ပယ်မတိုင်မီနိုင်ပါတယ်တီထွင်ထားရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပစ္စုပ္ပန်အလောင်းတွေသင်ပေးသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ယူခဲ့ကြပြီးနောက်ဤအဖှံ့ဖွိုးတိုးသာ, သတိရှိရှိနှင့်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အခြားလိင်အတွင်းကိုယ်နှိုက်၏နှိမ်နင်းသည်အခြားဘက်ခြမ်း၏အပြင်ဘက်၌စကားရပ်နှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်အခြားအဘို့အသီးအသီးလိင်များ၏ဆွဲဆောင်မှုများ၏အကြောင်းရင်းသူ့ဟာသူ၌ဆန့်ကျင်ဘက်အာဏာဟူသောအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဘို့အလိုဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပြီး, ။ နှစ်ဦးစလုံးမှာသဘောသဘာဝအညီအမျှဟန်ချက်ညီဖြစ်ကြပြီးအမှန်တကယ်တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းအတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်သည့်အခါစစ်မှန်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ ဤသည်သာအများအပြားဘဝအသက်တာ၌ရှည်လျားသောအတွေ့အကြုံများအပြီးနှင့်ဆည်းကပ်ဝယ်ယူထားပြီးအပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒါဟာသင်ပေးနိုင်ပြီး, မှာနောက်ဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝကိုကျေနပ်မနိုင်ရာတစ်ခုခုလည်းမရှိကြောင်း, လူသိများသည်လူအပေါင်းတို့အားကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝအားဖြင့်လေ့လာသင်ယူသည်။ ဒါဟာတဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကောငျးကြိုးအတှကျသို့မဟုတ်ကောင်းသော, လိုအပ်လျှင်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုအရှုံးမပေးရန်စိတ်အားထက်သန်နေဖြင့်, ဘုရားနှင့်အတူပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အတွင်းစိတ်တောငျ့အသုံးပြုပုံကာမဂုဏ်ဘဝနှင့်အတူတစ်ဦးမကျေနပ်မှုများကသူ့ဟာသူထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကွိုးစားတဦးတည်းရဲ့သဘောသဘာ၏အခြားနားမှာစေ တခြားသူတွေရဲ့တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်ရေးရာဆန္ဒနှင့်ဝေးမည်သည့်ကာမဂုဏ်အရာဝတ္ထုကနေဖယ်ရှားသောစစ်မှန်သောအချစ်၏နွေဦးကိုတက်သည်။ တဦးတည်းရဲ့မိမိကိုယ်ကိုများ၏အတွင်းစိတ်ခြမ်းကတိတော်များနှင့်သှေးဆောငျအတူပါလာလိမ့်မယ်အရာလှပသော airy ပုံစံများကိုမဆိုအဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သောအာရုံ၏ဖြစ်ကြပြီး parley မရှိဘဲပယ်ချရပါမည်။ အခြားလိင်များအတွက်ခံစားချက်ကတော့ဆည်းကပ်သက်သေပြနေသည်အဖြစ်တုံ့ပြန်တဲ့သူ, အတွင်းခံကိုပြောင်းရွှေ့နေသည်။ undeviating ဆည်းကပ်အတွေးနှင့်အလုပ်အတွက်ပေးထားသကဲ့သို့, ကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ် (ဘယ်တော့မှမပါဘဲ) အတွင်းအခြားမိမိကိုယ်ကိုတုံ့ပြန်ပါဘူး။ ဤအမှုကိုပြုသောအခါလိင်ပြဿနာကိုထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို "အလိုတော်" အကယ်. ပြိုင်ပွဲအားဖြင့်ပြုလေ၏အဖြစ်ယခုကွဲကွာမျိုးဆက်ပွားတပ်ဖွဲ့များ, အလောင်းတွေဝါဒီများကိုစွမ်းအားများနှင့် generate နိုင်သည့်တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းသို့ပေါင်းစည်းခဲ့ကြရကြလိမ့်မည်ကြောင့်ထိုသို့ပြုတော်မူသောထိုလူ၏နောက်တဖန်လိင်တစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ incarnate ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ယင်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံခဲ့သည့်တတိယကာလ၏။
ဤစကားမှန်လက်ထပ်ထိမ်းမြား precedes သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများအနက်ဦးနှောက်၏ယခုကျမဲ့အသက်ဝိညာဉ်-အခန်း (ထို pineal ဂလင်းများကဲ့သို့) အချို့သောယခု atrophied ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ဘဝထဲသို့နိုးထဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကိုနှင့်နှလုံးစဉ်ဆက်မပြတ်အပြတ်အတောက်အကြွင်းမဲ့အာဏာသိစိတ်ကိုရယူဆီသို့ဦးတည်လျက်, အဆုံးအဖြစ်အဘယ်သူမျှမကအခြားရည်မှန်းချက်အပေါ်သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုခံရကြပါစေ။ သတိဖှံ့ဖွိုးတိုးတအသက်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပြည်နယ်ရောက်ရှိပါပြီအခြားအလောင်းတွေ၏အဆောက်အဦးဖွင့်ဘို့လိုအပ်သောခဲ့ကြပြီ။ ခေတ်သေးပိုကောင်းရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်ဝိညာဏ်တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်သောအခြားအလောင်းတွေ၏အဆောက်အဦးဖွင့်ဘို့လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ အချိန်တိုတိုနှင့်ကျွန်တော်ရှာသောသတိ, မခန္ဓာကိုယ်သည်ဆိုပါကလမ်းကိုတောက်ပသည်။ ထိုအခါမှသာတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကအစေခံရန်ဖြစ်ပါသည်ရည်ရွယ်ချက်သည်အရာသည်၎င်း၏အပြည့်အဝတန်ဖိုးကိုပေးပါ။ တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဝိညာဏ်ရောက်ရှိအတွက်မဟုတ်ဘဲယင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ယင်း၏ပုံစံ၏အကောင့်အပေါ်အသုံးဝင်မှုမှအချိုးအစားအတွက်တန်ဖိုးရှိ၏။ ကျနော်တို့အရှင်တခြားအရာအားလုံးထက်အထက်ဝိညာဏ်ကိုကိုးကှယျခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေလျင်မြန်စွာအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်အလင်းနှင့်အတူတောလိမ့်မည်။
သူတို့သညျပညာမြင်လေ၏အမျိုးအနွယ်၏ပန်းသီးစားရကြ၏မတိုင်မီ * သတ္တဝါ၏ဤပြိုင်ပွဲအာဒံ-ဧဝရဲ့ဇာတ်လမ်းအားဖြင့်ကျမ်းစာထဲမှာ allegorized ဖြစ်ပါတယ်။
†ဤအရှိဆုံးရှေးဟောင်းလူမျိုးနှင့်အတူဓမ္မငှက် phoenix ၏ဇာတ်လမ်း၏မူလအစသည်။ ဒါဟာ phoenix အချို့သံသရာ၏တစ်ဦးချင်းစီထပ်မဖြစ်အောင်မှာထင်ရှားယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာသူ့ဟာသူရှို့မယ်လို့ဆိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာခဏငယ်ရွယ်ပြီးလှပင်း၏ပြာကိုကနေနောက်တဖန်မထလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်း၏မမြင်ဘူး-မှတဆင့်ဝင်စားညွှန်ပြခဲ့သည်။ လိင်၏တရားမှနှိပ်ပါ, ငါတို့အလောင်းအတွက်ဆဲလ်တွေဒီအဆုံးလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။